MitrThai.com - แหล่งความรู้สำหรับแรงงานข้ามชาติ
သင့်အနေနှင့် မည်သို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိထားရန် လိုအပ်ပါသနည်း။
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား၏ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် သားသမီးများ၏ အခွင့်အရေး
မီးဖွားအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ကလေးစရိတ် ထောက်ပံကြေးခံစားခွင့်
Want to send your children to school?
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတို့အတွက် အသီးသီးသော ဝန်ဆောင်မှုများ
ဆိုသည်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြ သော ကမ္ဘောဒီးယား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ (လာအိုနိုင်ငံ)၊ မြန်မာနိုင်ငံတို့မှ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အားပေးမြှင့်တင် ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် အသိပညာနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအား မျှဝေဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း အပါအဝင် နိုင်ငံခြားသား လုပ်သားများ လက်လှမ်းမီ ရယူနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုပါ ထည့်သွင်းပေးသွားပါမည်။ ဥပမာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်လုပ်ရန် မလာရောက်မီ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားရမည့် အချက်များ၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုနှင့် သက်ရှင်နေထိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများအား ရယူအသုံးပြုခြင်း၊ လုပ်သားဈေးကွက်နှင့် ကိုက်ညီမည့် ကျွမ်းကျင်မှု စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ သက်ဆိုင်ဆီလျော်သည့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပေးမှုများ စသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပြီး ၎င်းသတင်းအချက်အလက်များသည် ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သား ကိုယ်တိုင်နှင့် လိုက်ပါလာသူ မိသားစုဝင်များအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများ ဖြစ်ထွန်းစေပါမည်။
ဆွစ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (SDC) ၏ရန်ပုံငွေဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ နေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း (IOM) မှ အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်နေသော PROMISE အစီအစဉ်ဖြင့် MitrThai.com ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကတည်းက ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
Mitrthai ဝက်ဖ်ဆိုက် →
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ကိုးဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ
ခရီးမထွက်ခွာခင် မူရင်းနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားများအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ၊
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မှု မပြုမီ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များ
အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်နှင့် အလုပ်ခန့်စာချုပ်ကို ဖတ်ရှူစစ်ဆေးမှု
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းသို့ မည်ကဲ့သို့သော ဘေးကင်းစွာဖြင့် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ရမည်နည်း။
• ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ အစုအဖွဲ့ဖြင့် မဟုတ်လဲ တစ်ဦးတည်း ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရာ၌ မည်သို့ ပြင်ဆင် ထားရမည်နည်း။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ အလုပ်သမားများ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသော အလုပ်သမားများအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ
• ထိုင်းယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာ • လူမှုဖူလုံရေးရန်ပုံငွေ • အလုပ်သမားလျော်ကြေးရန်ပုံငွေ
သံရုံးလိပ်စာ နှင့် ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်
ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည် တိုးမြှင့်ရေးနှင့် လေ့ကျင့်မွမ်းမံမှု
မြန်မာ-ထိုင်း MOU ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ ၁မိနစ်-စစ်တမ်း
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိုမျက်ခြေမပြတ်စေရန် ကူညီပေးမည့် အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာများကိုလေ့လာပါ။
ကိုဗစ် ၁၉ သည် သင်၏ ဘဝ နှင့် အလုပ်အကိုင်အား ဘယ်လို ထိခိုက် အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြပါ။
ကြေငြာချက် ! ဧပြီ ၂၆ ရက်မှစတင်၍ နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်ခြင်း နောက်ဆုံးစည်းမျည်း စတင်မည
ဘန်ကောက်နှင့် အခြားခရိုင် ၆၀ ရှိသူများသည် အပြင်ထွက်သည့်အချိန်နှင့် အများပြည်သူနေရာများ၌ သွားလာချိန်တွင် အဝတ် သို့မဟုတ် ဆေးဘက်သုံး နှာခေါင်းစည်း ကို အမြဲတပ်ဆင်ထား ရမည်။ ၄င်းကို ဧပြီလ ၂၆ ရက်မှစတင်မည်။
နိုင်ငံ၃နိုင်ငံမှ အလုပ်သမားများအတွက် အသုံးဝင်သော(Hotline)ဖုန်းနံပါတ်များပါဝင်သည်
၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ ပြဌာန်းချက်အရ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များသိမ်းဆည်းစုဆောင်းခြင်းအား ၂၀၂၁ ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၁ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ အထိ အချိန် ၂လထပ်မံတိုးမြှင့်ခြင်း
MitrThai by Migrant Working Group
Facebook icon Migrant Working Group Messenger icon MWG Thailand MitrThai.com
ဝဘ်ဆိုက် visit ည့်သည်စာရင်းဇယား
Total Visit : 9804
© 2020, MitrThai.com